यातायात व्हीलचेयर बनाम म्यानुअल को चयन Karman® TV-10B
घर / म्यानुअल व्हीलचेयर / यातायात व्हीलचेयर
कुनै पनि सीट आकार16 "सीट17 "सीट18 "सीट19 "सीट20 "सीट22 "सीट
कुनै पनि प्रयोगकर्ता वजन१ .250 .१ एलबीएस वा कम250 पाउण्ड - 300 पाउण्ड400 एलबीएस वा अधिक
यातायात व्हीलचेयर बनाम म्यानुअल प्रोपेल मोडेल किन्न
यातायात व्हीलचेयर वा साथी कुर्सीहरु साथी व्हीलचेयर जहाँ उद्देश्य एक साथी को लागी प्रयोगकर्ता धक्का को लागी हो। हाम्रा धेरैजसो ट्रान्सपोर्टरहरु स्विंग टाढा खुट्टा आराम, निश्चित armrests, र साइड प्यानल छन्। यसको सट्टा सामान्य 'ठूलो पछाडि - सानो अगाडि' पाels्ग्रा धेरै व्हीलचेयर को विशिष्ट, हल्का यात्रा कुर्सीहरु कुर्सी को धेरै सजिलो गतिशीलता प्रदान चार साना पाels्ग्रा छन्।
कति गतिशीलता ब्रान्डहरु वास्तव मा क्र्यास टेस्ट उनीहरुको यातायात व्हीलचेयर? हामी बाहेक अरु कुनै कम्पनीले गर्दैन। हामी उच्च गुणस्तर र सुरक्षा को लागी पट्टी सेट। को बारे मा अधिक जान्नुहोस् S-ERGO आज र सबै क्र्यास परीक्षण एस आकार आसन फ्रेमहरु। साथै हटाउन सकिने मिसिन धुने र dryable कुशन द्वारा बनाईएको संग धेरै वैकल्पिक मोडेल को बारे मा अधिक जान्नुहोस् AEIGIS® उपचार गरियो विरोधी माइक्रोबियल लेपित बस्ने प्रणाली.
ट्रान्सपोर्टर कुर्सी एक साथी व्हीलचेयर जहाँ उद्देश्य एक प्रयोगकर्ता को लागी धक्का को लागी साथी हो।
यस श्रेणी मा धेरैजसो कुर्सीहरु स्विing टाढा खुट्टा आराम छन्।
हाम्रो साथी कुर्सीहरु को अधिकांश armrests र साइड प्यानलहरु निश्चित छन्।
हाम्रो साथी कुर्सी सामान्यतया १ - - २ bs पाउण्डको बीचमा हुन्छ।
हाम्रो यात्रा कुर्सीहरु को धेरै टिकाऊ हल्का एल्युमिनियम बाट बनेका छन्।
यातायात गतिशीलता एक मानक १″ ″ / १ ″ मा उपलब्ध छ र धेरै जसो एक संकीर्ण १″ ″ / १″ ″ सीट चौडाइ मा पनि छन्।
हल्का यात्रा कुर्सीहरु
गतिशीलता को सहायता को लागी तपाइँको निवास बाहिर बाहिर वा डाक्टर को कार्यालय को भ्रमण मा यात्रा कुर्सीहरु को हाम्रो लाइन ब्राउज। यी व्हीलचेयर सामान्यतया सजिलो यातायात को लागी हल्का वजन हो, र धेरै मोडेलहरु भण्डारण र प्रयोग को आसानी को लागी तल तह।
पोर्टेबल कुर्सीहरु को हाम्रो चयन सुविधाहरु र विकल्पहरु छन् कि अन्य निर्माताहरु लाई प्रदान गर्दैनन्। तपाइँ आफ्नो व्हीलचेयर जस्तै साथी सक्रिय हात ब्रेक, विरोधी tippers, र अन्य सामान को रूप मा सुविधाहरु संग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षा र गतिशीलता
तपाइँको अन्य गतिशीलता आवश्यकताहरु को लागी, गतिशीलता उपकरणहरु को हाम्रो चयन ब्राउज, सामान र बाथरूम सुरक्षा उत्पादनहरु। तपाइँ विभिन्न शरीर को प्रकार र आकार को लागी धेरै फरक सुविधाहरु संग व्हीलचेयर पाउन सक्नुहुन्छ। कुशन जेल, फोम वा संग बनाइएको Aegis उपचार कभर तपाइँ दिनभरि सहज रहन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य सामानहरु सामेल छन् सीट बेल्ट, टाउको आराम र पाउच बोक्नुहोस्.
व्हीलचेयर सुविधाहरु, घटक, र रंग विकल्प
पा considered्ग्रा कुर्सीहरु कि यातायात मानिन्छ सुविधाहरु, घटक, र रंग छनौट को धेरै फरक फरक छन्। तपाइँ उनीहरुलाई निश्चित armrests, डेस्क लम्बाइ armrests, र स्थायी निश्चित हतियार, फ्लिप फिर्ता armrests, प्याडेड हतियार, र हटाउन सकिने पूर्ण वा डेस्क लम्बाइ armrests संग पाउन सक्नुहुन्छ।
सबै उपलब्ध reclining परिवहन कुर्सी चार पाels्ग्रा र एक क्रस ब्रेस कि कुर्सी को सीट को लागी जान्छ संग आउँछ। उनीहरु १० देखि २० पाउण्ड सहित धेरै फरक तौल वर्गहरुमा आउन सक्छन्।, २० देखि ३० पाउण्ड।, र ३० पाउन्ड भन्दा बढी। कम कुर्सी तौल, राम्रो यो यात्रा सहज को आफ्नो उद्देश्य को लागी हो।
सम्भावित प्रयोगकर्ता को तौल को आधार मा, त्यहाँ तौल वर्गहरु कि शरीर को प्रकार को विभिन्न प्रकारहरु को लागी उपयुक्त छन्। तपाइँ उनीहरुलाई २०० देखि ३०० पाउण्ड सम्म पाउन सक्नुहुन्छ।, ५०० पाउण्ड सम्म सबै तरीकाले। वजन क्षमता। र choices छनौट फरक फरक हुन सक्छ र यो फ्रेम रंग र धेरै भाग को लागी असबाब रंग शामिल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कालो, चाँदी, नीलो, र रातो र color्ग फ्रेम, असबाब कालो देखि चाँदी र दुबै को मिश्रण को रूप मा फरक पर्न सक्छ।
के यी परिणामहरु उपयोगी थिए? हामीलाई थाहा दिनु.
एक यात्रा कुर्सी छनौट एक ठूलो निर्णय हो, र तपाइँ निश्चित हुन चाहानुहुन्छ कि तपाइँ कुनै पनी बाधाहरु बिना एक कुर्सी को सबै लाभहरु काट्नुहुनेछ। हामी हाम्रा कुर्सीहरु लाई हल्का हुन को लागी डिजाइन गरीयो ताकि उनीहरु यात्रा को लागी प्रयोग गर्न सजिलो छ। तिनीहरू कारहरुमा सजीलो ढुवानी र भण्डारण को लागी foldable छन्। एक यात्रा कुर्सी पनी व्यक्तिहरु जो सामान्यतया व्हीलचेयर को आवश्यकता छैन को लागी एक मूल्यवान गतिशीलता सहायता हो। उनीहरु एक परिवार को सदस्य वा हेरचाहकर्ता द्वारा धकेलिएको हो, उनीहरुको सानो पाels्ग्रा को लागी यो असंभव प्रयोगकर्ता को लागी आफैलाई प्रेरित गर्न को लागी हो।
हिड्ने एड्स को प्रयोगकर्ताहरु लाई एक हल्का यात्रा व्हीलचेयर एक आरामदायक विकल्प हो जब विवाहहरु जस्तै लामो घटनाहरु मा भाग लिन वा जब तपाइँ बाहिर हुनुहुन्छ पाउन सक्नुहुन्छ।
कसरी एक वाहन मा एक व्हीलचेयर ढुवानी गर्न को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, एक व्हीलचेयर को रोकथाम मा लेख समीक्षा गर्नुहोस्।
संसाधन - प्रत्येक उत्पादन ल्यान्डि Page पृष्ठ उत्पादन (जस्तै HCPCS कोड, आयाम, साहित्य, UPC, आदि) को लागी सम्बन्धित सबै जानकारी छ। यदि तपाइँ चश्मा र विवरण द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पादन हेर्न चाहानुहुन्छ, कृपया क्लिक गरेर हाम्रो संसाधन ल्यान्डि page पृष्ठ मा जानुहोस् यहाँ। जाँच गर्नुहोस् कार कुर्सीहरु। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् अवतरण पृष्ठ निर्देशिका.
प्रश्न र उत्तर पा Whe्ग्रा कुर्सी र बस र रेल सेवा को सम्बन्ध मा
मेडिकेयर पाe्ग्रा कुर्सी र स्कूटर लाभ
अल्ट्रा लाइटवेट म्यानुअल कुर्सीहरु को लागी गुणवत्ता मापदण्ड र मान्यता आवश्यकताहरु
के यातायात व्हीलचेयर म्यानुअल व्हीलचेयर भन्दा राम्रो छ?
यदि तपाइँ यातायात व्हीलचेयर को लागी किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ एक म्यानुअल प्रोपेल व्हीलचेयर को लागी तपाइँको लागी उपयुक्त हुने प्रश्नमा आउन सक्नुहुन्छ। यो साँच्चै निर्भर गर्दछ। तेसैले तपाइँ कम से कम साना पाels्ग्राहरु को लागी 5-10 पाउण्ड बाट बचाउनुहुन्छ, तर तपाइँ पनि गतिशीलता लाई ढिलो गर्न सक्नुहुन्छ आफैंलाई समायोजित गर्न वा तपाइँको आत्म लाई प्रेरित गर्न को लागी जब आवश्यक पर्दछ। धेरै विनिर्माण एकै फ्रेम को उपयोग गर्दछ र मात्र एक सानो वा ठूलो पा .्ग्रा मा राखीन्छ। हामी ध्यानपूर्वक हाम्रो कुर्सीहरु डिजाइन र तपाइँ फरक देख्नुहुनेछ। Karman मा, हामी म्यानुअल व्हीलचेयर को लागी छनौट गर्न को लागी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन्। सामान्य मा, यदि तपाइँ आफैलाई एक व्हीलचेयर मा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ उपलब्ध सबैभन्दा हल्का सबैभन्दा आरामदायक व्हीलचेयर चाहानुहुन्छ। उपलब्ध सबै कोटिहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् र त्यसपछि उत्पादन वजन र बजेट द्वारा छनौट गर्नुहोस्। यहाँ केहि श्रेणीहरु र तपाइँको समीक्षा को लागी जानकारी हो: